Banki Qadari ah oo 13 bilyan oo doollar ku doonaya xuquuqda baahinta horyaalka Talyaaniga! – Gool FM
Raage January 4, 2018
(Roma) 04 Jannaayo 2018 – Kulankii caadiga ahaa ee koongarayska Lega Serie A, ayaa maanta ka hadlay arrimo fara badan oo khuseeya horyaalka heerka 1-aad ee Talyaaniga.
Waxyaabaha laga hadlay waxaa ugu waawaynaa xuquuqda TV-yada baahinaya horyaalka Talyaaniga min 2018-2021 iyadoo sida uu qorayo warsidaha Corriere della Sera, uu jiro xiise wayn oo ka imanaya banki ku yaalla dalkaasi Qaday.
Bankiga Caalamiga ah ee Qadar ama International Bank of Qatar, ayaa la sheegayaa inuu Lega Serie A usoo bandhigay dalab ku kacaya 13 bilyan oo euro oo ay muddo 10 fasal-ciyaareed ah ay ku iibsanayaan xuquuqda baahinta horyaalka Talyaaniga.
Arda Turan iyo Theo Wallcott oo isu bandhigay AC Milan